यौन चाहना र खानेकुराबीच कस्तो छ सम्बन्ध ? - Everest Dainik - News from Nepal
यौन चाहना र खानेकुराबीच कस्तो छ सम्बन्ध ?
मानिसहरूले यौन स्वास्थ्यलाई विशेष गम्भीरताका साथ लिने गरेका छन् । कुनै विशेष प्रकारको खाद्य पदार्थले कामेच्छामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पप्रमाणित हुने हो भने त्यस्तो खाद्यवस्तु उच्च मूल्यमा तत्काल बिक्री हुनेछ ।
राम्रो यौन स्वास्थ्यका लागि सन्तुलित आहार, सक्रिय जीवनशैली र राम्रो मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक पर्दछ । तर के यस्ता कुनै विशेष खाद्य पदार्थ छन् जसले प्राकृतिक रूपले यौन क्षमता बढाउन सकियोस ?
मानव इतिहासमा लामो समयदेखि यौन क्षमता बढाउने कुरा चिकित्सकीय चासोको विषय रहिआएको छ । कतिपय समाजहरूमा चिशेष प्रकारका कह्द्य सामग्रीहरूलाई यौन स्वास्थ्यवर्धक भनेर बुझिने गरेको छ ।
बिबिसीमा पप्रकाशित यस आलेखमा केही खानेकुरा र तिनको यौन क्षमतामा प्रभावसम्बन्धी मान्यताको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सी-फुडको प्रयोग र यौन स्वास्थ्य
इतिहासमा क्यासानोभा भन्ने एकजना प्रेमीको चर्चा हुने गरेको छ । आफ्नो समय निकै प्रख्यात प्रेमीको रूपमा चिनिएका उनले खाजामा ५० सिपी खाने गरेको बताइन्छ ।
क्यासानोभा १८ औं शताब्दीका प्रख्यात इटालियन नाविक हुन् र उनको नाम उनका साहसपूर्ण समुद्री यात्राका साथै उनका प्रेम सम्बन्धका लागि समेत लिने गरिन्छ ।
धेरैले भन्ने गरे अनुसार उनले धेरै महिलाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए ।
यसो भनिने गरे तापनि सिपी नै खाएर यौन शक्ति बढ्ने कुनै प्रमाण भने छैन । चिकित्साशास्त्रमा यसको कुनै उल्लेख नै छैन । यसो हुँदाहुँदै पनि क्यासानोभाले सिपी खाने गरेको हल्ला चाँहि कसरी फैलियो त ?
ग्रीसेली मान्यता अनुसार प्रेमकी ग्रीसेली देवी एफ्रोडाइटको उत्पत्ति समुद्रबाट भएको थियो । त्यसैले पनि समुद्री भोजनलाई यौन क्षमता बढाउने भोजनका रूपमा मान्ने गरिएको हुन सक्छ ।
सिपीमा जस्ता (जिङ्क) पाइन्छ । जस्ता टेस्टोस्टेरोन उत्पादनका लागि आवश्यक पोशाक तत्त्व पनि हो । एउटा शोधमा जस्ताले शुक्रकीटहरूको गुणवत्ता बढाउने भएकाले यसलाई पुरुषको बाँझोपनको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै जस्ताक अन्य स्रोतमा सेलफिस, रातो मासु, फर्सी, तिल, काजु-बदाम, दूध, केराउ, पनीर र सिमी (राजमा) जस्ता खाद्य पदार्थ रहेका छन् ।
डार्क चकलेटको कस्तो छ प्रभाव?
शोधकर्ताहरूले डार्क चकलेटले मानिसमा प्रेम गर्ने भावना उत्पन्न हुने बताएका छन् । यसमा फिनाइल इथेलामाइन (पीइए) नामक रसायन हुने गर्छ । यसलाई ‘लभ केमिकल’ पनि भन्ने गरिन्छ ।
पीइए मानव शरीरले प्रेम सम्बन्ध स्थापना भएको केही महिनामा उत्पादन गर्न थाल्दछ । यसले डोपामाइन जस्ता हार्मोनको उत्सर्जनमा मद्दत पुऱ्याउँछ र मानव मस्तिष्कभित्र आनन्द र खुसी नियन्त्रण गर्ने केन्द्रलाई उत्तेजित पर्ने गर्दछ ।
तर चकलेटमा पाइने पीइएको मात्रा निकै कम हुने भएकाले यो चकलेट खाइसकेपछि पनि सक्रिय रहिराख्छ भन्ने कुरामा भने शंका रहेको छ ।
यसका साथै धेरैले चकलेटको प्रमुख घटक कोकोओले शरीरमा रक्त प्रवाह बढाउने र खुसी बनाउने हार्मोन सेरोटोनिनको स्तरलाई बढाउने गर्दछ ।
चकलेट र यौनबीचको सम्बन्ध कति पुरानो ?
स्पेनी खोजकर्ता एर्नान कोर्तेसलाई चकलेट पत्ता लगाउने पहिलो युरोपेली भन्ने गरिन्छ । उनले लामो समय अमेरिकी महाद्वीपका माया र एजटेक साम्राज्यमा बिताए ।
उनले स्पेनका राजा कार्लोस प्रथमलाई एउटा पत्र लेखेर मायामा पिउने गरेको कोकोआ चकलेटको बारेमा आफूले बुझिराखेको र यसमा ‘थकानसँग लड्ने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता’ समेत भएको उल्लेख गरेका थिए ।
हुन सक्छ स्पेनीहरूलाई चकलेटका चिकित्सकीय फाइदाहरूबारे पत्यार लाग्यो होला । तर मायाका नागरिकहरूले भने यस्तो मान्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छैन ।
साथै माया साम्राज्यमा चकलेटको प्रयोग यौन शक्ति बढाउन गर्ने गरिएको समेत कुनै प्रमाण भेटिएको छैन ।
चकलेटमा पाइने ट्रिप्टोफ्यानले तनाव र अवसादसँग लड्न सहयोग गर्ने गर्दछ । यसका अन्य स्रोतमा साल्मोन माछा, अण्डा, पालुंगो, बदाम र भट्मास पर्दछन् ।
के खुर्सानी यौन क्षमताबर्धक छ ?
अध्ययनहरूले खुर्सानीमा क्यापसाइसिन हुने बताएका छन् । यसले शरीरमा एंडोर्फिनको मात्रा बढाउने बताइन्छ । यो मानिसलाई खुसी राख्ने एउटा अर्को हार्मोन हो ।
यसका अतिरिक्त यसले शरीरमा मेटाबोलिज्म दुरुस्त पार्दछ र शरीरको तापमान र हृदय गति समेत बढाउने गर्दछ । यस्तो अनुभव यौनक्रियाका क्रममा गर्ने गरिन्छ ।
यौन क्षमता र रक्सीको सम्बन्ध ?
रक्सीले संकोच कम गरेर इच्छाहरूमा बढोत्तरी त गर्न सक्ला तर यसले यौन क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव भने पार्दैन । धेरै रक्सी पिउने महिला तथा पुरुषमा बिस्तारै भावुकता कम हुने समेत शोधहरूका नतिजाले देखेका छन ।
साथै यसले यौन क्षमतामा ह्रास ल्याएर नपुंसकताको स्थिति ल्याउन सक्छ ।
कसरी कम गर्ने नपुंसकता ?
केही शोधहरूले केही फ्लेभोनोइड्स (बोटबिरुवाबाट बनेका) युक्त समृद्ध खाद्य पदार्थले नपुंसकता कम गर्ने बताएका छन् ।
अध्ययनहरूमा ब्लुबेरी र त्यस्तै अन्य अमिलो फलफुलमा पाइने एंथोसायनिनमा नपुंसकता रोक्ने गुण हुने गर्दछ ।
फ्लेभोनोइड्सयुक्त खाद्य पदार्थ र नियमित व्यायामले नपुंसकताको समस्या २१ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको छ ।
केही शोधहरूले नपुंसकता रोक्न र सहज यौन क्रिया जारी राख्न सन्तुलित आहारको ठुलो भूमिका हुने बताएका छन् । यसमा अप्रशोधित अन्न, फलफुल, तरकारी, ओखर जस्ता तैलीय सुक्खा फल र जैतुनको तेल सामेल छन् ।
एंथोसायनिन नामक पदार्थको पनि यसमा ठुलो भूमिका हुन सक्छ । यसका अन्य स्रोतहरूमा चेरी, ब्ल्याकबेरी, क्र्यानबेरी, रास्पबेरी, अंगूर र रातो बन्दा रहेका छन् ।
यौन इच्छा बढाउने खाद्यसामग्रीलाई अंग्रेजीमा ‘एफ्रोडिजियेक्स’ भन्ने गरिन्छ । यो शब्दको उत्पत्ति ग्रीसेली देवी एफ्रोडाइटको नामबाट भएको हो । यौनलाईतीन श्रेणीमा राखिने गरेको छ: कामेच्छा, यौन सम्पर्क राख्न सक्ने शक्ति र यौन सुख ।
तर यस प्रकारका खाद्यपदार्थले मानिसमा काम गर्छन या गर्दैनन भन्ने कुरा वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हुन् सकेको छैन । वास्तवमा, एक मात्र एफ्रोडिजिएक्स खानाले काम गर्ने गरेको पुष्टि हुन सकेको छ त्यो पाकेका र सडेका फलहरूको गन्ध हो ।
यौन स्वास्थ्यका विशेषज्ञ डा. क्रिकम्यान मानिसहरू कामोत्तेजक खाद्य पदार्थको सेवन गर्ने कारण तिनले काम गर्लान भन्ने विश्वास रहेको बताउँछन् । उनको सुझाव छ यदि कुनै खाद्यपदार्थले सकारात्मक नतिजा देखाउँछ भने यसले कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन ।
धेरै खालका कामोत्तेजक खाद्यपदार्थ छन् । कतिपयले विभिन्न वनस्पतिको चोप या अन्य त्यस्तै पदार्थ सेवन गर्ने सुझाव समेत दिने गर्छन् । तर यस्ता चीजले फाइदा या नोक्सान के गर्छन् भन्ने कुराको टुंगो नलागेसम्म यिनको सेवन नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
यदि कुनै मानिसमा यौन चाहना या शक्तिको कमी छ भने यो विशुद्ध चिकित्सकीय समस्या हुन सक्छ र चिकित्सकको परामर्श अनुसार उपचारपश्चात टीक हुन सक्छ ।
ट्याग्स: sex and food